Cha. I-3 Edition ekhethekile - Isisekelo Semivuzo
Ikhaya Cha. I-3 Special Edition
SIYAKWAMUKELA kuhlelo lwethu lokuqala olukhethekile
Njengokwelashwa kwasehlobo ngasekupheleni, I-Reward Foundation iyaziqhenya ngokumemezela ukuthi ixhase ukusebenza kwe-Edinburgh kwe- 'The Coolidge Effect'.
Umphumela we-Coolidge nguWonder Fools kulesi sonto ku-Traverse Theater e-Edinburgh
I-Reward Foundation iyajabula ngokuba ngumxhasi wesidlali esisha esimnandi esibizwa ngokuthi Umphumela we-Coolidge yi-The Wonder Fools. Siyakukhuthaza ukuba ufike bese uyibona. Imininingwane yamalanga nezindawo ezingezansi.
Ku-2017, izithombe zobulili ezingcolile zikhula ngesilinganiso sokuhlola: e-UK kuphela, izikhathi ezingaphezu kwe-7 million zocansi zocansi zibhekwa nsuku zonke. Njengoba ukufinyelela komphakathi kwezithombe zobulili ezingcolile kuyanda, nathi singasenqikaza ukukhuluma ngakho. Umphumela we-Coolidge ifuna ukuphula leli taboo.
Esikhathini esiyinhloko salokho okushayela izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ukuba kube imboni yamadola ayizinkulungwane eziyinkulungwane Umphumela we-Coolidge. Lo mcimbi wemvelo, ongalungile ohlelweni lwendalo, laklanyelwe ukusenza sisebenzise ozakwethu abalingani bokubeletha lapho umsebenzi wethu wokufaka umquba ubonakala ukwenziwa. Isebenza ngu ukwakha ukubekezelelana, noma isithukuthezi, umuntu ofanayo noma isisusa sokuba khona kwakhe kuyaba 'mnandi' ebuchosheni bokuqala. Ngokuhamba kwesikhathi sifuna isifiso esingaphansi komlingani ofanayo wezocansi.
Njengoba kuvela ezindabeni ezikhulunywa ngabagqugquzeli bezithombe zobulili ezingcolile, izilutha, ochwepheshe bezempilo yengqondo, abafundisi bezingozi zokuqwashisa ezingcolile ngobulili, lezi zindaba eziyingqayizivele nemibono bayatshelwa ngezindaba ze-4 ezithandanayo: uGeorge, umdlalo we-Gameboy ophethe intsha; UGary, ubaba walahlekelwa ekujuleni komlutha wakhe; UGail, umkhiqizi wezithombe eziphuthumayo we-porn kanye ne-Retrospect, umlutha we-porn ofuna ukuwaqonda.
Umphumela we-Coolidge isebenzisa inhlanganisela exhumanayo yokuxoxa izindaba, izinkondlo nesayensi ukuhlola ukuthi izithombe zocansi ziyithinta kanjani impilo yethu yengqondo, ubudlelwano kanye nokuhlangenwe nakho kocansi. I- Wonder Fools, iqembu elithakazelisayo futhi elithokozelayo lezemidlalo, liye laqonda lesi senzakalo sosuku lwangaleso sikhathi futhi lwaba yinto entsha yokuzibandakanya nokucindezeleka emoyeni.
Umbukiso waklonyeliswa ngokunconywa okukhethekile njengengxenye ye- “The Suitcase Prize” eNew Wolsey Theatre e-Ipswich ePULSE Festival ngo-2017. Ungababona ezindaweni ezilandelayo:
I-Traverse Theatre, e-Edinburgh: 20-22nd September 2017
I-Macroberts Arts Centre, i-Stirling: 20 Okthoba
I-New Diorama Theatre, eLondon: 15 November
Amathikithi nolwazi: wonderfools.co.uk